भर्खरै गएको भूकम्प ५.४ म्याग्निच्यूडको, केन्द्र विन्दु कहाँ ? – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/भर्खरै गएको भूकम्प ५.४ म्याग्निच्यूडको, केन्द्र विन्दु कहाँ ?
Breaking: भर्खरै काठमान्डौमा भूकम्पको धक्का महशुस काठमाडौं- काठमाडौं । भर्खरै महशुश गरिएको भूकम्प ५.४ म्याग्निच्यूडको रहेको बताएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले भारतमा गएको भूकम्पको धक्का नेपालमा पनि महशुस गरिएको बताएको छ । भूकम्प भारतको ग्यान्टोक (पूर्वी सिक्किम) भएको जनाइएको छ।
साथै कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, सिलिगुरी, जलपाइगुढी, भुटानलगायत क्षेत्रमा यसको धक्का महसुस भएको छ। सोमबार राती ९ः०५ बजे भूकम्पको धक्का महशुर गरिएको हो । सो भूकम्पको धक्का राजधनीमा समेत महशुस गरिएको थियो । ओखलढुंगा, सुनसरी, मोरङ, भोजपुर, खोटाङ सङ्खुवासभासहितका जिल्लामा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ।
भूकम्पको धक्का पूर्वी नेपालमा कडा महसुश भएको छ भने काठमाडौंमा पनि सामान्य महसुश भएको छ । पूर्वमा भने करिव एक मिनेटसम्म हल्लाएको स्थानीयबासीहरुले बताएका छन् । भुकम्पका कारण स्थानीयहरु त्रसित भएर घर बाहिर निस्किएका छन् ।केन्द्रबिन्दु नेपाल-भारत सीमा नजिक भएकोले नेपालको पूर्वी भागमा भूकम्पको ठुलो धक्का महशुस भएको हो ।
कुटपिटबाट कनकाईका विकको मृत्यु